ခွေးလေးတွေ အင်အင်းပါပြီးရင် ခြေထောက်နဲ့ဘာလို့ နောက်ပြန်ကန်တာလဲ ? – Trend.com.mm
သူတို့လေးတွေ အင်အင်းပါပြီး ခြေထောက်နောက်ပြန်ကန်တာကို သူများနိုင်ငံတွေမှာတော့
poppy dance လို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်။ ခွေးပိုင်ရှင်တွေ အပြင်ထွက်ပြီး သူတို့လေးတွေကိုကျောင်းတဲ့အခါ စိတ်ရှည်ရပါတယ်။ သူတို့က အပြင်လည်းထွက်လည်ရင်း အလေးသွားဖို့ နေရာကိုပတ်ပြီး စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ရှာကြတယ်။ နေရာတွေ့ပြီဆိုရင်တော့ လုပ်ငန်းစပါပြီ။
လုပ်ငန်းပြီးသွားရင် သူ့တို့ရဲ့ခြေထောက်ကို နောက်ပြန်ကန်တဲ့ poppy dance ဟာ မသိတဲ့လူတွေအတွက်တော့ နားလည်ရခက်စေတယ်။ တစ်ချို့ သိပြီးတဲ့ လူတွေလည်းရှိမှာပါ။ စာဖတ်သူတို့အနေနဲ့လည်း သူတို့ဘာလို့ နောက်ပြန်ကန်ရတယ်ဆိုတာကို စိတ်ထဲမှာ နားလည်ခက်နေမှာအမှန်ပါပဲ။ ဘာကြောင့်လဲ ?
တိရစ္ဆာန်ဆရာဝန် Dr.Patty Khuly က VetStreet မှာခွေးလေးတွေ ဒီလိုလုပ်ရတဲ့အကြောင်းကို ဖော်ပြထားပါတယ်။ သူတို့ ဒီလိုလုပ်ရတာ အကြောင်းရင်း (၂)မျိုးရှိတယ်။
– ပထမအချက် ပတ်ဝန်းကျင် သန့်ရှင်းစေချင်တာကြောင့် သူတို့ရဲ့မစင်တွေကို ဖုံးကွယ်တာဖြစ်ယ်။
– ဒုတိယအချက် သူတို့အပေါ့သွား ၊ မစင်စွန့်ပြီးတဲ့အခါ ထိုနေရာကို သူတို့ရဲ့မြေပိုင်အဖြစ် သတ်မှတ်လိုက်တာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ပြောထားပါတယ်။
ခွေးလေးတွေရဲ့လက်သည်း၊ ခြေသည်းတွေမှာ အနံ့ထုတ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ နေရာတစ်ခုခုကိုသူတို့ရဲ့လက်သည်းတွေနဲ့ ခြစ်ပြီးအမှတ်သားလုပ်ထားရင် ထိုနေရာကို သူတို့ချက်ချင်းမှတ်မိပါတယ်။ ပြောရရင်တော့ ဒီနေရာမှာ သူမစင်စွန့်ပြီးပြီ။ ဒါသူ့နေရာ.. ဘယ်သူမှမလာနဲ့လို့ဆိုလိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ပါ။
ဒါကို မကောင်းတဲ့အကျင့်တစ်ခုလို့လည်း ပြောလို့မရပါဘူး။ ဒီလိုခြေထောက်နောက်ပြန်ကန်တာကို သခင်က သွားဟန့်တားလို့မရပါဘူး။ တကယ်လို့ ခွေးလေးရဲ့ဒီအပြုအမူတွေဟာ သင့်ကို စိတ်အနှောင့်ယှက်ဖြစ်စေတယ်ဆိုရင် လုပ်နိုင်တာတစ်ခုတော့ ရှိပါတယ်။
သူ ဒီလိုနောက်ပြန်ကန်နေချိန် သူ့နာမည်ကို အော်ခေါ်လိုက်ပါ။ ဒီနည်းလမ်းက သူ့ရဲ့အာရုံကိုပျက်သွားစေပြီး လမ်းဆက်လျှောက်ဖို့ သင့်ကအမူအရာပြတဲ့အခါ သူ့အလုပ်ကို မေ့ပြီး သင်နဲ့အတူ လိုက်လာပါလိမ့်မယ်။ တကယ်လို့ ခြံထဲမှာ ခွေးကမစင်စွန့်ပြီး မြေကြီးတွေပွအောင်လုပ်နေတယ်ဆိုရင် လှမ်းအော်ပြီး ဟန့်လိုက်တာမျိုး ၊ အပြင်ကိုချက်ချင်းဆွဲထုတ်ပြီး မစင်စွန့်နိုင်တဲ့နေရာမျိုး ခေါ်သွားပေးပါ။
သူတို့လေးတှေ အငျအငျးပါပွီး ခွထေောကျနောကျပွနျကနျတာကို သူမြားနိုငျငံတှမှောတော့
poppy dance လို့လညျးချေါကွပါတယျ။ ခှေးပိုငျရှငျတှေ အပွငျထှကျပွီး သူတို့လေးတှကေိုကြောငျးတဲ့အခါ စိတျရှညျရပါတယျ။ သူတို့က အပွငျလညျးထှကျလညျရငျး အလေးသှားဖို့ နရောကိုပတျပွီး စိတျကွိုကျရှေးခယျြရှာကွတယျ။ နရောတှပွေီ့ဆိုရငျတော့ လုပျငနျးစပါပွီ။
လုပျငနျးပွီးသှားရငျ သူ့တို့ရဲ့ခွထေောကျကို နောကျပွနျကနျတဲ့ poppy dance ဟာ မသိတဲ့လူတှအေတှကျတော့ နားလညျရခကျစတေယျ။ တဈခြို့ သိပွီးတဲ့ လူတှလေညျးရှိမှာပါ။ စာဖတျသူတို့အနနေဲ့လညျး သူတို့ဘာလို့ နောကျပွနျကနျရတယျဆိုတာကို စိတျထဲမှာ နားလညျခကျနမှောအမှနျပါပဲ။ ဘာကွောငျ့လဲ ?
တိရစ်ဆာနျဆရာဝနျ Dr.Patty Khuly က VetStreet မှာခှေးလေးတှေ ဒီလိုလုပျရတဲ့အကွောငျးကို ဖျောပွထားပါတယျ။ သူတို့ ဒီလိုလုပျရတာ အကွောငျးရငျး (၂)မြိုးရှိတယျ။
– ပထမအခကျြ ပတျဝနျးကငျြ သနျ့ရှငျးစခေငျြတာကွောငျ့ သူတို့ရဲ့မစငျတှကေို ဖုံးကှယျတာဖွဈယျ။
– ဒုတိယအခကျြ သူတို့အပေါ့သှား ၊ မစငျစှနျ့ပွီးတဲ့အခါ ထိုနရောကို သူတို့ရဲ့မွပေိုငျအဖွဈ သတျမှတျလိုကျတာလညျး ဖွဈနိုငျတယျလို့ ပွောထားပါတယျ။
ခှေးလေးတှရေဲ့လကျသညျး၊ ခွသေညျးတှမှော အနံ့ထုတျနိုငျစှမျးရှိပါတယျ။ နရောတဈခုခုကိုသူတို့ရဲ့လကျသညျးတှနေဲ့ ခွဈပွီးအမှတျသားလုပျထားရငျ ထိုနရောကို သူတို့ခကျြခငျြးမှတျမိပါတယျ။ ပွောရရငျတော့ ဒီနရောမှာ သူမစငျစှနျ့ပွီးပွီ။ ဒါသူ့နရော.. ဘယျသူမှမလာနဲ့လို့ဆိုလိုတဲ့ အဓိပ်ပာယျပါ။
ဒါကို မကောငျးတဲ့အကငျြ့တဈခုလို့လညျး ပွောလို့မရပါဘူး။ ဒီလိုခွထေောကျနောကျပွနျကနျတာကို သခငျက သှားဟနျ့တားလို့မရပါဘူး။ တကယျလို့ ခှေးလေးရဲ့ဒီအပွုအမူတှဟော သငျ့ကို စိတျအနှောငျ့ယှကျဖွဈစတေယျဆိုရငျ လုပျနိုငျတာတဈခုတော့ ရှိပါတယျ။
သူ ဒီလိုနောကျပွနျကနျနခြေိနျ သူ့နာမညျကို အျောချေါလိုကျပါ။ ဒီနညျးလမျးက သူ့ရဲ့အာရုံကိုပကျြသှားစပွေီး လမျးဆကျလြှောကျဖို့ သငျ့ကအမူအရာပွတဲ့အခါ သူ့အလုပျကို မပွေီ့း သငျနဲ့အတူ လိုကျလာပါလိမျ့မယျ။ တကယျလို့ ခွံထဲမှာ ခှေးကမစငျစှနျ့ပွီး မွကွေီးတှပှေအောငျလုပျနတေယျဆိုရငျ လှမျးအျောပွီး ဟနျ့လိုကျတာမြိုး ၊ အပွငျကိုခကျြခငျြးဆှဲထုတျပွီး မစငျစှနျ့နိုငျတဲ့နရောမြိုး ချေါသှားပေးပါ။